Ra'iisal Wasaare Abiy Ahmed Oo Ka Hadlay Dhalashada Nebi Muxamed (SCW), Afar Qodob Oo Muhiim Ah Oo Laga Qaadan Karayo Mowliidka Nebiga Iyo Arrimo Kale Oo Diinta Islaamka La Xidhiidha - Jigjiga Online
HomeSomalidaRa’iisal Wasaare Abiy Ahmed Oo Ka Hadlay Dhalashada Nebi Muxamed (SCW), Afar Qodob Oo Muhiim Ah Oo Laga Qaadan Karayo Mowliidka Nebiga Iyo Arrimo Kale Oo Diinta Islaamka La Xidhiidha
Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed Oo Ka Hadlay Dhalashada Nebi Muxamed (SCW), Afar Qodob Oo Muhiim Ah Oo Laga Qaadan Karayo Mowliidka Nebiga Iyo Arrimo Kale Oo Diinta Islaamka La Xidhiidha
Jigjiga (JigjigaOnline) – Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed ayaa hambalyo u diray guud ahaan shacabka Itoobiya, xuska maalinta dhalashada Nebiga Muxamed N.N.K.H oo ku beegan maalinta Sabtida.
Qoraal uu soo saaray Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed oo lagu baahiyey bogga Warbaahinta dalka ee EBC, ayaa waxa uu ku sheegay inay tahay maalin qur’aanka la akhriyo, sadaqana lala baxo si loo kaalmeeyo dadka aan waxba haysanin.
Qoraalka Ra’iisal Wasaare Abiy oo dhamaystiran ayaa waxa uu u dhignaa sidan:
“Munaasibadda xuska ciida Dhalashada Nabigeenna Muxamed (NNKH) waxay kamid tahay ciidaha sannad walba Muslimiinta dunidu sida wayn umaamuusaan.
Hadaba bagaad munaasabada 1,494aad ee ciida dhalashada Nabigeena Muxamed nabad kugaadheen.
Maalinta 12aad ee bisha Rabiical-Awal oo ah bisha 3aad ee Tirsi Taariikheedka Islaamka, Muslimiinta dunidu waxay sannad walba dunnida daafaheeda ku qabtaan munaasabada xuska Ciidda Mowwliidul Nabiyah.
Erayga “Mawliid” oo ah eray Afka carabiga laga soo minguuriyey ayuu macnihiisu yahay “dhalasho ama maalintii dhalashada”. Halka uu macnaha diiniga ah ee eraygu leeyahayna tahay dhalashadii Nabigeenna Muxamed (Naxariis & Nabadgalyo korkiisa ha ahaate).
Muslimiinta sharafta leh ee dalkeena Itoobiya.!
Ciidda Mowliidka ujeeddada ugu wayn ee ay xambaarsan tahay, waa in wax la sadaqaysto, laducaysto, qur’aankana Jusas la xushay ama dhamaan la akhristo, barnaamijyo kala duwan oo digri ahna laqabto oo ay maalqabeennadu masaakiinta siiyaan wax ay cunaan, wax ay cabbaan iyo wax ay xidhaanba islamarkaana kuwa xanuunsanya loogu duceeyo inuu Illaahay cuddurada ka dulqaado, kuwa aan dhasha haysana loogu duceeyo inuu illaahay awlaad khayr qabta siiyo, kuwa kala fogna Illaahay iskusoo dhaweeyo, kuwa dulmana uu xaqooda siiyo, masaakiinta la sharfo iyo inuu Illaahay wadanka noo nabadeeyo, oo uu Illaahay dawladda xasiliyo si ay shacabkeeda shaqooyinkii loo baahnaa ugu qabato.
Waxaan loo baahan yahay in Ciiddan wayn aynaan duco kaliya kudhaafine aan wixii uu Nabigeennu (N.N.K.H.) inooga tagay kudhaqano, waxaana wakhti xaadirkan la inooga baahan yahay inaan bulshadeena barro awaamiirta ay diintu nafarayso, hadii aan awaamiirta diinteena qaaliga ah fulinana waxaa hubaal ah; inay dhibaatooyinku inaga yaraanayaan oo ay nabad-galyadeena iyo midnimadeenu sii xoogaysanayso.
Nebi Muxamed (SCW) wuxuu sheegay inay dunidani ku tiirsan tahay 4 waxyaabood oo kala ah: Cilmiga wax lagu daaweeyo/lagu dabiibo, ruux weyn oo caddaalad ah, ducada qof wanaagsan iyo midhaha natiijada qofka geesiga ah.
Haddaba wakhti xaadirkan afartan shay ayaa nabad-gelyada, horumarka, midnimada iyo isjacaylka ummadaha dalkeena ahmiyad balaadhan u leh.
Waxa lagama maarmaan ah in meel walba oo dalkeena ka mid ah aan 4tan waxyaabood si dhab ah uga hirgelino.
Illaahay Itoobiya shacabkeedaba ha barakeeyo!
Ra’iisal wasaaraha Itoobiya Dr Abiy axmed
28 Diqimti, 2012
Madaxweynaha Iyo MW Xigeenka DDS Oo Eedayn Iyo Dembiyo Hor Leh U Jeediyey Madaxdii Ka Horreysay
Masuul Ka Socda Dawladda Deegaanka Soomaalida Oo Ka Qayb-galay Shir Caalami Ah Lagaga Hadlayo Saxaafadda Bulshooyinka Kala-Qaybsan